Zava-dehibe hiarovana ny fiteny Nepalbhasa “‘tandindomin-doza tanteraka” ny fitaovana nomerika · Global Voices teny Malagasy
Dr. Subhash Ram Prajapati: Ilaina ny famatsiam-bola hanohanana ny hetsiky ny vondrom-piarahamonina
Voadika ny 22 Avrily 2021 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, Español, Português, Esperanto , English
Dr. Subhash Ram Prajapati, ethnômozikôlôgy ary mpiaro fatratra ny fampiroboroboana ny kolontsaina Newar. Sary natolotry ny Dr. Prajapati.
Ao amin'ny andiany fahatelo ankehitriny, mandray ireo mpikatroka fiteny vaovao izay hikarakara ny resadresaka amin'ny Twitter maharitra herinandro momba ny famelomana sy fampiroboroboana ireo fiteny vitsy an'isa ao Azia ny fampielezan-kevitra @AsiaLangsOnline tohanan'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation sy ny O Foundation.
Ho fitokanana ny fisantarana andraikitra haino aman-jery sosialy taona 2021, niresaka tamin'i Dr. Subhash Ram Prajapati (@jwajalapa) tamin'ny alàlan'ny mailaka momba ny zavatra niainany betsaka tamin'ny famolavolana ireo fitaovana nomerika ho an'ny fiteny Nepalbhasa (Newar) ny Rising Voices. Mpanandra-teny malaza iray ho an'ity fiteny nosokajian'ny UNESCO ho “tandindomin-doza” ity, nanoratra boky fito momba ny fiteny sy kolontsaina Newar i Prajapati ary nanoratra ny asa-karoka hahazoany Ph.D amin'ny ethnômozikôlôgy avy amin'ny resaka momba ny mozika Newar.
Vakio bebe kokoa: Very sy hita: Ny tolona hitandroana ny lova ara-pitenenan'i Nepal
Rehefa avy nanorina sy nandray anjara tamina hetsika marobe momba ny fitehirizana ny kolontsaina, anisan'izany ny vavahadin-tserasera sy ny klioban'ny fianarana fiteny amin'ny Facebook, mitarika tetikasa famadihana ho nomerika ny Nepalbhasa ankehitriny ny Dr. Prajapati. Vao tsy ela akory izay, namoaka ny rakibolana an-tserasera ahitana iditra eo amin'ny 30.000 hatramin'izao ny vondrona, mahatonga azy ho lahatahiry lehibe indrindra amin'ny fitehirizana ity fiteny ity, na nomerika izany na pirinty.
Amin'izao areti-mandringana COVID-19 manelingelina ny fandaharam-pianarana olona manokana, dia eo an-dàlana ny ezaka ataon'ny vondrom-piarahamonina mba hampianatra ny Nepalbhasa an-tserasera, saingy tsy ho ampy hamenoana ny banga amin'ny fitaovana io. Araka ny asehon'ny fikarohana nataon'i Dr. Prajapati, maro ny asa miandry ireo mpiaro ny fiteny sy ireo mpanabe:
Hitako fa tena ilaina ity famolavolana ara-maso momba fikajiana/fampiroboroboana ny Nepal Bhasa ity ao amin'ny famelabelaran'i @jwajalapa.
Tsy vaovao ity fihenjanana eo amin'ny fivasohan'ny fampiasana ny fiteny ity. Nihena ny isan'ny mpiteny Nepalbhasa farafahakeliny tanatin'ny taompolo maro, noho ireo karazana politika isan-karazany manamaivana ny fiteny tany aloha, ka ny setriny nataon'ny fiarahamonina dia ny famolavolana fitaovana sy votoaty fampandrosoana ny fianarana, araka ny nasongadin'i Dr. Prajapati tao amin'ny fifanakalozana mailaka nataonay:
Nepalbhasa no tenim-pirenen'i Nepal taloha, na dia nihena be aza vao haingana ny isan'ireo mpiteny azy sy ny fampiasana ny fiteny. Raha ny fanisam-bahoaka natao tamin'ny taona 2011 tao amin'ny Firenena Nepal, dia miisa 1,3 tapitrisa ny Newar manana ny Nepalbhasa ho fitenin-drazany. […] Ny taona 1952 ka hatramin'ny 2011, nidina hatramin'ny 75% ny isanjaton'ny mpiteny ny fiteny raha 22% tao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu, izay heverina ho toerana niandohan'ny fiteny.
Nihafaingana ny fijotsoana ao anatin'ny andro maoderina saingy misy ihany koa ny ezaka isan-karazany eran'izao tontolo izao mampiroborobo sy mamelona indray ny fiteny. Betsaka ankehitriny ny olona miasa amin'ny famoronana fitaovam-pianarana sy loharanom-pahalalana samihafa an-tserasera mba hampiroboroboana ny fiteny. Ny tanàna sasany ao amin'ny lohasahan'i Kathmandu ohatra nanomboka nanangana (lesona) fampianarana Nepalbhasa teny an-toerana ho ampianarina any an-tsekoly.
Rising Voices (RV): Inona araka ny eritreritrao no fanamby lehibe atrehin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiteny misy anao raha miresaka momba ny serasera nomerika na mamorona votoaty nomerika amin'ny tenin-drazan-dry zareo?
Subhash Ram Prajapati (SRP): Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao no tsy manana fotoana hianarana sy hampiasana ny fiteny Nepalbhasa any an-tranony, any an-tsekoly na any am-piasana. Na ireo mailaka miteny aza mahita fahasarotana amin'ny famakiana sy fanoratana ny fiteny Nepalbhasa. Noho io antony io, dia lasa voafetra be ny fifandraisana sy ny famoronana votoaty nomerika amin'ny fiteny. Misy ny faribolana kely ahitana mpamorona votoaty, ary vitsy koa ny mpijery.
Ankoatra izay, voasoratra amin'ny endri-tsoratra Devanagari amin'izao fotoana izao ny Nepalbhasa. Tsy ampy ny fitaovana sy ny teknolojia hanoratana amin'ny soratra nentim-paharazana toa ny Nepal Lipi, Ranjana Lipi. Voafetra ihany koa ny fitaovana misy amin'ny fitaovana sy sehatra sasany. Mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny fiteny nomerika ny lalana tsy mitovy amin'ny fivoarana nomerika amin'ny fiteny isan-karazany. Raha tsy misy amin'ny aterineto ny fitaovana sy ny enti-miasa, na ireo mailaka miteny ny Nepalbhasa aza mety hijanona tsikelikely amin'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto.
RV: Araka ny hevitrao, inona ny sasany amin'ireo dingana azo raisina mba hampirisihana ny fitomboan'ny fampiasana ny Nepalbhasa amin'ny aterineto?
SRP: Mieritreritra aho fa zavatra maro no azon'ny fikambanana sy ny olona isan-tsokajiny atao. Ohatra, raha afaka miaro ny governemanta hamoaka ny vaovaon'izy ireo na tranonkala fampahalalana hafa amin'ny fiteny eo an-toerana ihany koa izahay, na raha afaka mangataka ny hanao antontan-taratasy hisian'ny endrika amin'ny fiteny eo an-toerana amin'ny alàlan'ny aterineto izahay, dia hanana fotoana hampiasa ny tenin-dreniny amin'ny fiainana isan'andro ny olona.
Nandritra ny areti-mandringana, raha mbola nijanona tao an-trano ny ankamaroan'ny olona, ​​dia nisy ny olona sasany nanomboka fampianarana soratra sy fiteny Nepalbhasa an-tserasera. Ny sasany koa nanomboka manao tsianjery ny tantara sy ny tononkalo ary ny hafa indray nanomboka namorona lalao an-tserasera sy fitaovam-piteny koa. Nanomboka ireo rehetra ireo an-tsitrapo ny olona. Raha afaka mitantana famatsiam-bola izahay farafaharatsiny mba handrakofana ny fampandrosoana ny fitaovana toy izany sy hahatonga azy ireo maharitra, dia heveriko fa ho voatarika ny olona ary hampitombo ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto.
RV: Inona no antony manosika anao voalohany hiasa amin'ny fanaovana ny fiteninao sy ny kolontsainao ho hita amin'ny aterineto?
SRP: Tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny fiainako, dia nahita fihenana be tamin'ny fampiasana ny Nepalbhasa aho. Mahatsapa aho fa raha tsy manao zavatra hiarovana sy hampiroboroboana azy izahay, dia ho foana mandrakizay ny fiteny ao anatin'ny taranaka iray na roa. Ny fahaverezan'ny fiteny koa dia fahaverezan'ny fahalalana ara-kolontsaina sy maha-olombelona. Ho ahy, ny mahamaika amin'ny fiarovana ny fiteny sy ny kolontsaina Newar ho velona sy hiroborobo no antony voalohany manosika hiasa amin'ny fanaovana ny fiteny sy ny kolontsaina ho vonona amin'ny aterineto.
Azonao atao ny manaraka ny fanentanana AsiaLangsOnline ao amin'ny Twitter manomboka amin'ny 7 aprily.